Masviriro andakaita maid wangu ainyanya kugara asina kupfeka bhurugwa! - Nhau Dzevakuru
Masviriro andakaita maid wemazigaro ainyanya kugara asina kupfeka bhurugwa! Chokwadi shuwa mukadzi uyu aive muyedzo. From day one ndakaona kuti uyu babe uyu anga ana SATAN chaiye mukai make because i could tell kuti mukati mekadress kapfupi ako manga musina bhurugwa.
She was good with the kids and the cleaning. Kubika aive number one asi haa garo rese raigara panze asina panty. Saka ndakaziva zvaaida coz it seemed like aipfeka mushe kana mukadzi wangu aripo but when its me there haa magaro ese panze… Here is one picture i took backview…
Anonzi Stella anobva kuKadoma and musi uyu ndakasvika kumba ndakadhakwa hangu ndikati ndoda kumupa surprise she will never forget. It wasn’t a shopping voucher from those famous online shops no i had the perfect surprise for her…
Ndakasvika ndikaona achicleaner and ndakaburitsa mboro yangu ndokupfekedzera mubeche and she didn’t move a muscle. Instead akatopushira kumashure… Ndakadzupura ndokudzosera yese and ndokubata waistline yake ndokusvira zvinemongo…
Akachemerera and ndakamuzvambura nemboro ndokutundira mukati. Hapana akataura nemumwe ndakaenda ku bedroom and didn’t see her till the wife was home. Ndakabva ndaziva what she prefers it kuti tiite chivande and i promised myself that i was gonna surprise her some more.
Reason why i sent you this story is i am looking for Stella… Since that day resviro akabva angosiya basa and left, no one knows why or where she went. Mwana aiyinaka iyeye and I hope musi wandichamuwana ndichapihwa makumbo again just for old times sake.
Masviriro andakaita maid
Previous articleFirst time yangu kusvirwa nevarume three
Next articleNyoro naManager wepaLodge Part 2 – Married Woman kunakirwa nechihure